ज्यामिरगढी खुल्ला दिसामुक्त घोषणा - Jhapa Online
ज्यामिरगढी खुल्ला दिसामुक्त घोषणा
ज्यामिरगढी, १२ साउन । हाल मेचीनगर नगरपालिकामा गाभिएको साविक ज्यामिरगढी गाविस खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले ज्यामिरगढीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरे । प्रमुख अतिथि आचार्य र विशेष अतिथि नगर उपप्रमुख मीना उप्रेतीले खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको प्रतीक हरियो झण्डा फहराएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको तर्फबाट ज्यामिरगढीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । घोषणा समारोहमा आफ्नै लगानी र स्थानीय सामग्रीको समेत प्रयोग गरी तोकेको समयभित्रै सुरक्षित चर्पी निर्माण र समुचित प्रयोग गर्ने विपन्न घरधुरीका ललिता राजवंशी, तालामोही हेमरम र अम्विका दर्जीलाई सम्मानस्वरुप वडा कार्यालयको तर्फबाट सरसफाइ सामग्री प्रदान गरिएको थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथि आचार्यले पूर्वको प्रवेशद्वार मेचीनगरलाई सरसफाइमा समेत नमूना बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । “हामी पनि निर्वाचित भएर आएपछि सुरुमै सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि धेरै काम गर्न सकेका थिएनौं”, उनले भने, “अब ढिलो नगरी नगरपालिकालाई सरसफाइमा नमूना बनाउन योजनावद्ध तरिकाले लाग्छौं ।” नगर उपप्रमुख मीना उप्रेतीले सरसफाइ प्रवद्र्धन र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सामाजिक जागरण र परिचालन आवश्यक भएको बताइन् ।
ले सबै जनाले सरसफाइ प्रवद्र्धनलाई जीवनशैली र जीवनको आदर्श ठान्न सकेमात्र साँचो अर्थमा दिगो सरसफाइ प्रवद्र्धन हुन सक्ने बताए ।
मेचीनगर–१५ का वडाअध्यक्ष गुणराज भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमका झापा जिल्ला संयोजक विनोद शर्मा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका रुद्रबहादुर न्यौपाने, वडा सचिव यशु लिम्बू, सरसफाइ उपभोक्ता समितिका सचिव हेमकुमार राई, नेकपाका भीम खवास, नेपाली काँग्रेसका युद्धराज ओली लगायतले पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । वडाध्यक्ष भट्टराईले कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि प्र्रतिवद्धता गराएका थिए ।
हाल मेचीनगर नगरपालिका, वडा नं. १५ र ७ को केही भागमा रहेको ज्यामिरगढीमा ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा बिराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरेको हो । २ हजार ३ सय ११ घरधुरी रहेको ज्यामिरगढीमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन हुनुअघि १ हजार २ सय ३५ घरधुरीमा सुरक्षित शौचालय रहेका थिए भने अभियानको क्रममा बाँकी १ हजार ७६ घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी निर्माण भएका थिए ।
अन्य निकाय समेत घोषणा हुँदै
झापा जिल्लामा रहेका साविकका अन्य गाविससहरु समेत खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेका छन् । जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अनुसार कचनकवल गाउँपालिकामा पर्ने साविक केचना र घेराबारी अन्तिम गुणस्तर अनुगमन भै खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको तयारीमा रहेका छन् । गौरादह नगरपालिकामा गाभिएको साविक बैगुन्धुरा गाविस समेत अन्तिम गुणस्तर अनुगमन भैसकेको छ । यसैगरी झापा गाउँपालिकामा पर्ने साविक टाघनडुब्बाको अन्तिम गुणस्तर अनुगमन भैसकेको छ भने साविक शरणामतीको समेत अन्तिम गुणस्तर अनुगमनको क्रममा रहेको छ ।
विर्तामोड नगरपालिकामा अन्तिम गुणस्तर अनुगमन गर्न बाँकी वडा नं. ७ समेत अन्तिम गुणस्तर अनुनगमनका लागि तयार रहेको वडा सदस्य प्रेम थापाले जानकारी दिए । यसअघि नै गुणस्तर अनुगमन भैसकेको वडा नं. १० लाई आउँदो बुधबार खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै वडा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी रहेको कचनकवलमा अब साविक पथरियामा एक साताभित्र चर्पी बनाइसक्ने प्रतिवद्धता वडा तहका सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी गौरादह नगरपालिकालाई चार दिनभित्र खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा पु¥याइने खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गर्ने संस्था सहारा नेपालका कार्यक्रम संयोजक किसन गौतमले जानकारी दिए ।
लियो क्लब अफ अनारमनीमा समिरा